Mankalaza Ny Fandresen’i Trump Ny Nasionalista Sy Ny Mpandrendri-Bahoaka Any Serbia Sy Makedonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2016 2:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, srpski, русский, Français, čeština , Ελληνικά, English
Nampientanentana fatratra ireo politisiana elatra havanana sy ireo mpikambana ao aminy any amin'ny firenen'i Balkan maro ny fandresen'i Donald Trump tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena tany Etazonia.
Maro ny antony mahatonga ny fanehoan-kevitra tahaka izany, izay miainga amin'ny rikoriko manoloana an-dry Clintons, ny fahatsapana firaisan-kina amin'ny elatra havanana amerikana, ka hatramin'ny fitoviam-pijery itoviana amin'i Trump ho samy tsy tia finoana Islamo. Ankoatra izany, eo ambany tara-kevitra rosiana mirona kokoa amin'ny fandresen'i Trump ny hevi-bahoaka any amin'ireo firenena ireo.
Ao Serbia, ny fomba fielezan'ny fomba fijerin'i Trump dia mifototra amin'ny petra-kevitra hoe ‘namako ny fahavalon'ny fahavaloko.’ Ny fanoherana an-dry Clintons, izay nanome tsiny ny fandarohana baomba nandritra ny adin'i Kosovo tamin'ny taona 1998-99, sy ny fidirana an-tsehatra nataon'ny OTAN nandritra ny fitsaboana nandritra ny ady Yogoslavy, no nametraka an'i Trump ho tsara toerana ao amin'ny fitiavan'ny politisiana nasionalista elatra havanana tahaka an'i Vojislav Šešelj avy amin'i Antoko Radikaly Serba farany ankavanana.
Heverina ho tena akaiky dia akaiky ny governemantan'ny praiminisitra serba Aleksandar Vučić ny Informer, ary tafiditra lalina tamin'ny ‘fanaovana hazalambo ny fampitam-baovao’ — fanentanana fanosoram-potaka ary famoahana fandrahonana ireo mpilaza vaovao fanadihadiana namoaka trangan-kolikoly avo lenta maromaro.
Nitatitra ny tranonkalam-baovao Balkan Insight fa any ampitan'ny sisintanin'i Serbia, any Kosovo sy Bosnia sy Herzegovina, “maro ireo Albaney sy Bosniaka no mitaraindraina amin'ny faharesen'i Hillary Clinton.”
Tahaka ny hita any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, dia feno fanehoan-kevitra momba ny vokatry ny fifidianana tany Etazonia ihany koa ny tambajotran-tserasera makedoniana. Maneho hevitra amin'ny tsy fifanaraham-peo ara-pahalalana amin'ny fanomezan-tsiny an-dry Clinton nefa minia tsy mijery ny vokatry ny zavatra nataon'ilay mpitondra tsy refesi-mandidy Slobodan Milošević ny mpisera Twitter Srbak.
Amin'ny ankapobeny fanambarana ofisialy fohy no navoakan'ny politisiana Makedoniana momba ireo kandidà rehetra. Na izany aza dia maro ireo mpikambana ao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana, elatra havanana VMRO-DPMNE, no naneho hafaliana tamin'ny fandresen'ny Repoblikana any Etazonia, izay heverin-dry zareo ho mpiara-dia sy mpanohana. Maro ireo nampita ny dikasary avy amin'i Antonijo Milošoski, mpikambana ao amin'ny parlemanta sady minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha tao amin'ny Facebook ofisialin'ny antoko. Tao izy nanova ny fanafohezan-tenin'ny VMRO, izay midika hoe Fikambanana Revolisionera Makedoniana Anatiny, tamin'ny fanoloana ny teny hoe “Revolisionera” ho lasa “Repoblikana.”
Maro ireo asa hafa natao Photoshop. Iray amin'ireo ohatra tena lasa lavindra (jereo ny sary ambony indrindra amin'ity lahatsoratra ity) ilay mampiseho an'i Trump ho Manamboninahitra an-tsoavalin'ny Tempoly manao kroazady (amin'ny miozolomana) nirahin'Andriamanitra (maneho ny soatoavina mahazatra ara-pianakaviana) manofahofa ny saina Makedoniana taona 1992-95 dia ny Masoandro Vergina (mampiseho ny fitohizan'ny firenena Makedoniana hatrany amin'ny fotoana nanjakan'i Alexander ilay Lehibe).
Maro ireo fifanakalozan-kevitra miresaka ny fandresen'ny elatra havanana ao Etazonia, ampifandraisina amin'ny fifidianana ho avy amin'ny volana desambra ao Makedonia, ao anatin'ny lantom-peo mitovitovy amin'ny fahafinaretana miresaka ny Brexit. Etsy ankilan'izay dia manamarika ihany koa ny sasany fa nifidy hiala amin'ny tsy-fihetsehana ny vahoaka Amerikana, izay raha avadika amin'ny zava-misy ao Makedonia dia midika ho faharesen'ny elatra havanana.
Nampita fomba fijery iray avy amin'i Slobodan Jakjoski, mpisera media sosialy malaza iray ny vavahadim-baovao Okno.mk:
Eny, miresaka ny rafitra fakana mpanjifa ataon'ny VMRO aho. Raha mihevitra ianao fa ilay olona ampiasaina ao amin'ny fitantanam-panjakana mibontsina rehefa nizaka tsy fananana asa an-taonany maro dia tsy mahalala ny zava-misy namonoan'ny polisy olona ary niezaka ny manafina izany, fa tsy misy ny fanakanana ny hala-bolam-panjakana, fa manao fanaraha-maso tsy ara-dalàna hatraiza hatraiza ny polisy miafina dia mamita-tena ianao.
Mandritra izany fotoana izany, ao Slovenia, nanomana lanonam-pankalazana tao amin'ny toeram-pisotroana iray ao an-tanànan'i Sevnica niaviany ny sasantsasany amin'ireo mpiray tanindrazana fahiny amin'i Melania vadin'i Trump [mg]. Toa tsy dia misy idiran'ny resaka foto-kevitra loatra ity fankalazana ity, ankoatra ny fitiavan-tanindrazana ao an-toerana.